Sifeeyaha Shiinaha Horizontal Caleemaha Soo saaraha Shidaalka iyo Badeecada | Huipin
Aagga Filter: 25-200㎡
Isticmaalka: Wasakhda Saliida
Qaab dhismeedka: Horizontal
Waxqabadka: Kala sifeyn hufan
Heerka otomaatiga: otomaatig buuxa
Xirxirida: Ku duubista filim caag ah
Sifeeyaha gariirka horizontal waa nooc ka mid ah waxtarka sare, keydinta tamarta, qalabka caddeynta sax ahaanta hawada tooska ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa kiimikada, batroolka, cuntada, dawooyinka iyo warshadaha kale. Waxay leedahay astaamaha soo socda:
1) sifeyn buuxda oo xiran, daadasho la'aan, wasakhaynta deegaanka.
2) saxanka shaashadda ayaa si otomaatig ah u soo jiidaya dhismaha, kaas oo ku habboon indha indheynta iyo nadiifinta.
3) shaandhaynta labada dhinac, aag sifeyn ballaaran iyo xajmi tiro badan.
4) dheecaan slag oo gariir ah, yaree xoogga foosha.
5) xakamaynta haydhka, hawlgalka otomaatiga ah.
6) qalabka waxaa laga dhigi karaa awood ballaaran iyo nidaam sifeyn ballaaran.
1) dib u soo kabashada keega shaandhada qalalan, keega filterka qalalan semi iyo sifaynta cadeynta.
2) warshadaha kiimikada: baaruudda, aluminium sulfate, iskudhisyada iskudhafka, balaastikada, dhexdhexaadka dheeha, dheecaanka maqaarka, saliida lagu daro saliidaha, polyetylen.
3) warshadaha cuntada: casiir, saliid, dewaxing iyo degreasing, qurxinta.
3. Halbeegga farsamada:
Taxanaha aagga / (㎡) Taxane dhexroor dhululubada (mm) Cadaadis
Awoodda waxqabadka (T / h.㎡) ssss
25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 1200,1400,1500,1600,1700,1800,2000 0.4 150 saliid 0.2
Haddii ay jiraan shuruudo gaar ah, waxaan sameyn karnaa horumarin iyadoo la raacayo shuruudaha isticmaaleyaasha.
Mashiinka miiraha ayaa filtarka ku shubi doona haanta oo ku buuxin doona haanta. Ficilka cadaadiska, wasakhda adag ee ku jirta filtrate-ka waxaa dhexgalaya shabaqa miiraha shaandhada, iyo keegga shaandhada ayaa lagu sameeyay shabaqa miiraha. Filterka ayaa lagu sifeeyaa shaandhada iyada oo la marinayo tuubada tuubada iyada oo la marinayo shaandhada, ka dibna filtrate-ka oo cad ayaa la helayaa.
Iyada oo ay sii kordheyso waqtiga sifeynta, wasakhda sii kordheysa ee adag ayaa lagu hayaa shabaqa miiraha, taasoo ka dhigeysa dhumucda keegga shaandhada oo sii kordheysa, taas oo ka dhigaysa iska caabinta shaandhada inay kororto cadaadiska taangiguna uu kor u kaco. Markuu cadaadisku kor u kaco qiime cayiman, wuxuu u baahan yahay dheecaan isdaba-joog ah, iyo filtrate-ka ayaa lagu joojiyaa tuubada, hawada la cadaadiyeyna waxaa lagu afuufayaa taangiga tuubada buuxisa, taangigana waa la sifeeyaa. Cadaadiska Haydarooliga ee weelasha kale, kuna afuufo keega qalalan. Xir hawada isku soo ururiyey, fur waalka balanbaalis, bilow gariirka, si gariirka daabku u gariiro, keegga shaandhada ee gariirka shaashadda shaandhada oo looga sii daayo salka taangiga maraakiibta hoose.
Hore: Sisinta Groundnut Sisinta Gabbaldayaha waxay soosaaraysaa Lawska Bocorka Xaydha Caleemaha
Sifee Toos ah
Sifeeyaha Tooska ah
Saxaafadda Tooska ah ee Tooska ah
Miiraha Saxaafadda Toosan
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Dhammaan Alaabooyinka Mashiinka Madbacada, Saliida Saliida, Mashiinka Saliida Qabow, Saliida Saliida, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Yar, Saliida Olive,